Musaveni | News From Somalia
Tag Archives: Musaveni
Shirkii London”Shirqoolkii London” oo dhamaaday lacagna la balan qaaday sidii kal hore.
Posted on May 7, 2013 by Voice Of Somalia Aside
Shirka London oo ah mid lagu uruurinayo dhaqaalo lagu xoojiyo shisheeyaha soo duulay si ay usii wadaan xasuuqa ka socda Soomaalia ayaa waxaa ka soo qeybgalaya in ku dhaw 50 Dowladood oo faragalin ku haya Soomaaliya.
Qadar,kuweyt,iyo Turkiga ayaa bixin doona dhaqaalo hub iyo mushaar lagu siin doono ciidamada kufaarta Amisom kuwaasi oo ah calooshood ushaqaystayaal duulaan gardarro ku jooga Soomaaliya.
Shirka London saddex saac ayuu socday aduun lacageed oo gaaraya…?…. ayaa loogu balan qaaday sidii kii kalhore isla meesha ka dhacay, ciidamada nabad ilaalinta Amisom iyo kuwa Dowladda waxaa laga wada hadlay dib udhiska Soomaaliya ,dib u habaynta iyo qalabaynta ciidamada dowladda,kufsiga haweenka in la joojiyo iyo howlgalada Qaramada midoobay ka fulin doonaan Soomaaliya, warqado dhowr iyo afartan bogg ka kooban waa la soo saaray” kalimadahaasi iyo kuwa la mid ah oo lasii qoray mudo hore,go’aano horey loo gaaray.
Dowladda Ingiriiska ayaa fara galin kuhaysa dalka Sooomaaliya iyadoo dhawaan Muqdisho ka furtay Safaarad,waxayna wakiil ka tahay dowlado iyo dad qarsoon oo dano gaarah dalka Somaliyeed oo la noqotay inow dayacanyahay.
La soco qeybaha danbe: Editor-Banaadir Post.
BAHDILKA MAXAA BADAY:- Yoweri Museveni Iskaga Fogaynayo Saacid Shirdoon iyo Saacid oo Labadiisa Gacmood Kudhajinaya Baadariga!.
Saacid Shirdoon waxaa la geeyey Madaxtooyada Uganda, wuxuuna la kulmay Baadari Yoweri Museveni, Qofkasta oo wax Akhriya oo Adduunka la socda waa og yahay Museveni in uu yahay Baari weyn oo Reer Galbeedku ay ku dhaartaan, sidoo kale Xaaskiisa ayaa Ururka Kaniisadaha Adduunka horjooge ka ah.
Museveni wuxuu ka faanayaa in uu xabadka saaro Nin Muslim sheeganaya ama Labada gacmood uu ku salaamo, gacanta inta uu fidiyey ayuu gadaal iskaga riixay Saacid Shirdoon, halka Saacidna Labadiisa Gacmood inta kudhajiyey Gacanta Baadariga Salaax iyo Qosal iskudaray!.
Siyaasiyiinta Soomaalida Ragga sheegta waa Niman aanan Adduunka la socon, kama fakaraan qaabka ay u istaagaan iyo qaabka ay Dadka u qaabilaan markii Kaamiro ama Warbaahintu ay la socoto, soo ceeb Wadamo badan kama ahan in Ninkale uu gacantiisa ku salaaxo Labadiisa gacmood?
Dhinaca kale Museveni habaarkii Muslimiinta ayaa kudhacay, Qof jirin ayuu u muuqdaa, Madaxii ayaa kala dheeraaday aadna wuu u caatoobay. Gaaladaas aan Saxarada iska mayrin ayaa sidaas la iskugu dhajinayaan oo laga raadinayaa taageero iyo Sharaf!.
XOGTA WARKA SOMALIMIDNIMO.
SAWIRO:-“Amisom is a War Criminals” Voice Of Somalia.
“Amisom is a War Criminals”
AMISOM & SOMALIA:-Amisom oo sheegtay inay taageero dhaqaale weydiisanayso Dowladda Iiraan maadama aan mushaarkooda meelna lagu sheegin.
Posted on February 25, 2013 by Voice Of Somalia Standard
Ciidamada shisheeye ee ku sugan Soomaaliya islamarkaana ku howlgala magaca Amisom ayaa u muuqda inay wajahayaan dhaqaala darro iyo baahi dhanka maaliyadda iyo Lojistikada ah, waxaana shirarkooda jaraa`id iyo hadalladoodu ay isugu biyo shubteen dhaqaale iyo taageero ay weydiisanayaan dalalka caalamka.
Amisom oo qaab calooshi u shaqaystenimo ku joogta Soomaaliya islamarkaana ay soo kiraysteen Mareykanka iyo Nato si ay uga baaqsadaan dhiig Soomaaliya kaga daata ayaa u tag waayay inay bixiyaan dhaqaalaha culus ee ku baxaya ciidamada shisheeye.
Reer galbeedku xilligan waxaa ay yihiin kuwo ay soo daristay dhaqaale darro xoogan waxaana gebi ahaanba dhulka galay dhaqaalohoodii iyadoo ay Musallafeen dhamaanba Bankiyadii Yurubta ugu waaweynaa.
Waxaana si ciidanka shisheeye loogu sii haayo Soomaaliya loo fasaxay inay qayla dhaan u dirsadaan wadamada caalamka oo dhan gaar ahaan kuwo u nasab sheegta Islaamka ee Mareykanka u sixran.
Dalalka Amisom ay ku calaacashay waxaa kamid ah wadanka Shiiciga ah ee Iiraan oo la wada ogyahay sida ay uga go`antahay in la baabi`iyo dadka Ahlu Sunnaha ah ee caalamka ku nool.
Afhayeenka ciidamada shisheeye ee Amisom oo dhowaan war jeediyay ayaa sheegay inay Dowladda Iiraan ka codsanayaan sidii ay taageero dhinac walba ah ugu fidin lahayd ciidamada Afrikaanta ah ee uu Afhayeenka u yahay.
Col Xaamud oo a hadlay wakaaladda Wararka Fars News Agency ee ay leedhahay dowladda Iiraan ayaa sheegay in taageero laga helo xukuumadda Tehran ay tahay mid aan laga baaqsan doonin oo xilligan aad loogu baahaynyahay.
“Ka Afhayeen ahaan waxaan soo dhoweyneyna dhamaan wixii dadaal ah ee lagu xallinayo xaaladda Soomaaliya, si gaar ah waxaan kaga codsanaysnaa Iiraan inay gacan noo fidiso” ayuu yiri Xaamud isagoo intaasi sii raaciyay in hor u kaca Amisom ay ku xirantahay in dhaqaale iyo Imkaaniyaatka loo baahanyahay la helo.
Ciidamada shisheeye ayaa Soomaaliya kaga jira dagaal jiho la`aan ah waxaana ay u muuqdaan inay lumiyeen Caskari ahaan hadafka dagaalkooda ay ka wadaan Soomaaliya maadaama ay xabaddu si xowli ah ugu socoto islamarkaana aanay jirin wax caskari ahaan ay ka soo xasiliyeen dagaalka.
Xarakada Islaamiga ah ee Shabaabul Mujaahidiin ee dagaalka lagu riiqmay kula jirta gaashaan buurta shisheeyaha ayaa goor sii horeysa badalay Taktiik-ga dagaalka ay ka wadaan Soomaaliya, waxaana tallaabadaasi ay noqotay mid ay aad ugu jaho wareeraan ciidamada shisheey,iyaga oo ka badin waayay inay taageero ka dalbaan Iiraan Turkiga iyo dowladaha lamid ah kadib markii looga baxay balantii laga qaaday ee dhaqaalaha faraha badan lagu siin lahaa maydadka askartoodana mag dhowga looga bixin lahaa.
Dhanka kale Iiraan oo qaaradda Afrika saamayn ku yeelanaysa mudooyinkii u dambeeyay ayaa fursad wanaagsan u aragta inay Soomaaliya faraha la soo gasho si ay ugu faafiso caqiidada Shiicanimada ah ee aadka u liidata, waxaana arinkaas laga dhadhansanayaa kulan dhexmaray Axmedi Najaad iyo Dhiggiisa Soomaaliya ay shisheeyuhu ilaaliyaan, Xasan Sh Maxamuud, kuwaasi oo ka wadahadlay in Iiraan ay saamayn ku yeelato Soomaaliya taa bedelkeedana ay la baxdo qayraadka islamarkaana badasho manhajka waxbarashada iyo Caqiidada Umadda.
DHAWAAQA BAADARI MUSEVENI MUXUU SALKA KU HAYAA?
Aniga oo aan inkirsaneyn in walaalo badani qalinka u qaateen inay cabiraan dhawaaqa Yuweri Museveni, ayaan haddana waxaan rabaa inaan cabir taariikhi iyo mid siyaasadeedba saaro qaylo dhaanta ka soo yeertay cammilkaan madow ee Museveni.
Sida caadada u ahba reer Galbeedka, kuwooda gaalada ahi, markii aay muuqato in uu dhammaaday wakhtigiisii midkii aay ku shaqaynayeen ha ahaado mid la diin ah ama mid hobowsan oo Muslim sheeganaya, waxaa soo shaacbaxda (pretext), in ceebo iyo eedaymo aay iyagu horey u galiyaan u baarbaaraan, si loo sharciyeeyo amase loo xalaashado in dambi lagu soo oogi karo markii la doono.
Maantana mindidii waxay dulsaaran tahay Baadari Museveni oo u muuqda mid haruubkiisii buuxsamay, lama huraana aay tahay inuu mari doono jidkii aay mareen raggii isaga qaar ka horeeyey qaarna ka dambeeyeen, sida Mobutu Sesaseko, Charles Taylor, Laurent Kabila, Laurent Koudou Gbagbo iyo kuwo kale oo dambi sugayaal ah haddana ummadda Muslimiinta iyo kuwaa aan ahaynba dhib weyn oo luggooyo ku haya loona soo adeegasaday sida kuwaan aan soo xusay.
Taariikh ahaan Jabhaddaan M23, ee Museveni lagu eedeeyey inuu taageero, lana aaminsan yahay inay liddi ku tahay nabad ku soo dabbaalaidda Jamhuuriyadda Congo maxay tahay?
Sidaad kawada dheregsan tihiinba dalka Uganda waxaa soo marey dagaalo aad u dheer oo ahli ah kadib qaadashadii xoriyadda ee 1963kii uu Ingiriiska ka xoroobay, waxaa soo marey ilaa tiro dhan afar(4) madaxweyne marka laga reebo boqorkiiBugandhaha oo uu Ingiriisku xukunkii dalka kaga tagay.
Museveni xukunka wuxuu kala wareegay isaga iyo jabhaddii National Rasistance Army (NRA),oo madaxda u yahay, General Tito Okello, oo muddo sanad ka yar ka talinayey Uganda. Museveni iyo jabhadiisuba waxay kaalmo dhaqaale iyo mid siyaasadeedba ka heshay reer Galbeedka, Mareykan iyo Ingiriis, waxay kaloo kaalmo ciidan iyo hiil qaraabanimo ka heshay qowmiyadda degta xadadka Jamhuuriyadda Congo, Rwanda, Burundi iyo Uganda, lana yiraahdo Tutsiga, qolada uu Museveni ka dhashay ee la yiraahdo Miyarwandhahana waxaa la aaminsan yahay inay Tutsiga dhalsho iyo dhareer wadaagba yihiin hiil iyo isu gurmashana ka dhaxayso.
Eedeynta Museveni lagu eedeeyey inuu gacan weyn siiyo jabhadda M23, waa wax xaqiiq ah waxaa gobolka Afrikada Dhexe (Central Africa), ka jiraa siraac ama tartan qowmiyadeed siyaasadna ku salaysan oo u dhexeeya qowmiyadaha xoolo raacatada ah ee oo la yaqaan Nilotic, Tutsiga iyo Mayarwandhuna ka mid yihiin iyo qolyaha kale ee beeralayda ah lana yiraahdo Bantuuuna badan gobolkaa laysku hayo.
Jabhadda M23 waxay u daggaalantaa xuquuqda dadka Tutsiga ah ee deggan Jamhuuriyadda Congo waxayna aaminsan yihiin inay iyaguna xukunka Congo lawareegaan sida Nilotiga kale uu ula wareeegay Burundi, Rwanda iyo Uganda oo aay iyana aaminsan yihiin inay isku qolo yihiin.
Joseph Kabila oo ah ninka hadda madaxweynaha ka ah Jamhuuriyadda Congo oo ka mid ah ragga hadda lagu shaqeeyo ka dib markii meesha laga wareejiyey aabbihii, waa Laurent Kabila, markuu shaqadii loo idmaday qabtay ayaa eedeynta Museveni loo haysto ka hor akhriyey waxa loogu yeero Golaha Ammaanka (Security Council), laakiin aan anigu u aqaan Golaha Shaydaanka iyo Sharta.
Warqadaa Kabila loo dhiibay ee xambaarsaneyd eedaynta Museveni oo isagu si la mid ah Soomaaliya ciiddamo calooshood u shaqystayaal ah u direy dalka Jamhuuriyadda Congo ayaa waxa eedaynta lagu yiri waxay ciidamadiisu xasuuq ba’an ka gaysteen Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Congo, waxayna kaalmo militari iyo mid dhaqaalaba siiyaan Jabhadda ku kacsan dowladda Jamhuuriyadda Congo , oo Museveni wuxuu ka soo horjeeda dadaaladda nabadda ee Beesha Caalamku waddo.
Hadalkaasoo u dhigma iyadoo kuwa Xamar jooga ee iyaguna camiiliinta ah intay golahaa aan sheegay geeyaan eed taa la mid ah iyagoo ku andacoonaya in Museveni iyo ciiddamadiisa calooshood u shaqaystayaasha ahi aay xasuuq ba’an ka geysteen Soomaaliya taageerana siiyaan Al-Shabaab.
Museveni wuxuu ka mid ahaa rag dhowr oo xilligii Bill Clinton, madaxweynaha ka ahaa dalka Mareykan la rabay in dib loo cusbooneysiiyo gumeysiga Afrika, wuxuuna hormuud ka ahaa isaga iyo Zenawigii bakhtiyeyba mashruuc la oran jireyKhariidadda Cusb ee Africa (New Map in Africa). Labadaa baadariba waxaa loo wakiishay Bariga iyo bartamaha Afrika.
Museveni ma awooda inuu ciidamo kala baxo labada dal ee uu ciiddamada u direy, sababtoo ah awood dhaqaale oo uu kula baxo ma hayo oo awalba ma keenin isagu oo qolada uu xarbu wakaalaha (proxy war) u wado ee reer Galbeedka ayaa keentay haddana mushaharka iyo baahida kaleba daboosha, midda labaad siyaasiyan ulama bixi karo, waayo isaga iyo cid walba waxa siyaasiyan laga xukumaa golihii aan soo xusay oo cid ka hor imaan kartaa ma jirto marka laga reebo cidda keliya ee Alle (swt) ku xiran isaguna waaba baadari aan Alle aqoon.
Haddaba dhawaaqiisu wuxuu la mid yahay mid geeri sugaya oo la’ meel uu u ciirsado waxaana la joogaa xilligii kuwa rabbiga isaga u ahi aay shaqo ka qaban lahaayeen waana arrin go’aan laga qaatay, waxaaba isweydiin mudan inuu yahay mid meesha ku daahay oo intaaba inuu sii joogo maaheyn nin loo taliyo,
mana muuqato cid gobolka deggan oo gacan siin karta, sababtoo ah dhammaan waxay qabaan in ninkani gobolka ku qaan gaarey madaxda kale ee Afrikada Bari iyo tan dhexebana uu isagu Sayid isaga dhigay amase uu u madaxweyn yahay maadaama uu muddo lix iyo labaatan sano ah (26) kursiga xaaraanta ah ku fadhiyey howl dambe oo looga fadhiyaana aayan jirin lana helayo camiiliin cusub oo dhega fudud xukunkana baahi badan u qaba.
Ugandha oo mar kale ku celisay in Ciidamadeeda Soomaaliya ka jooga ay kala baxayaan Go’aankoodana uu yahay mid aysan ka laabaneynin.
Posted on November 4, 2012 by Voice Of Somalia Standard
Wasiirka Ammaanka Uganda, Wilson Mukasa ayaa sheegay in go’aanka Ciidamadooda ay uga qaadanayaan Soomaaliya uu yahay mid aysan ka laabanaynin, balse ay marka hore wafdi heer Wasiir ah u dirayaan New York si ay Qaramada Midoobay ugu sharraxaan go’aankoodan.
Ugandha ayaa ka carootay Guddi ka socday Qaramada Midoobay oo baaris ku sameeyay dagaallada ka socda DR Congo, Iyagoo warixin ay soo saareen Guddigaas ku sheegay in Uganda iyo Ruwanda ay taageero siiyaan jabhadda ka dagaallanta bariga DR Congo taasoo ah midda ugu Awoodda badan ee dagaalka kula jirta dowladda dalkaas ka jirta.
“Uganda waxay go’aansatay inay ciidamadeeda kala soo baxdo, Soomaaliya, DR Congo iyo Afrikada dhexe, si ay u xoojiso ammaankeeda gudaha,” ayuu yiri Mukasa oo wariyeyaasha kula hadlayay magaalada Kampala shalay oo Jimco ahayd.
Wasiirka ammaanka Uganda wuxuu ku dooday inay ku daaleen inay ilaaliyaan mar walba Nabadda dalalka ay dariska yihiin, balse ay hadda go’aansadeen inay xoojiyaan nabadda dalkooda, intii ay ilaalin lahaayeen nabadda dalal kale.
Afhayeenka milateriga Uganda, Felix Kulayigye ayaa isna sheegay inay sugayaan Amar, haddii amrakaas la siiyana ay ku dhaqaaqi doonaan tallaabada la amray. isagoo ku daray hadalkiisa: “Maalin kuma darsan doonno joogitaankeenna Soomaaliya haddii amar nala siiyo.
Xukuumadda Uganda ayaa dhowr jeer ku celisay inay ciidamadeeda kala baxayso Soomaaliya, Balse lama oga Hadalkan haatan kasoo yeeray in uu mari doono kuwii hore halkii ay mareen iyo in kale.
Ciidamada Uganda oo weli go’doon ku ah agagaarka deegaanka Yaaq-bari-weyne.
Posted on October 22, 2012 by Voice Of Somalia Aside
Askarta Uganda aya weli ku sugan Dhul howd ah oo Duleedka ka ah Deegaanak Yaaq-bari-weyne ee Gobalka Shabeelah hoose halkaasi oo Maalmihii la soo dhaafay ay dagaalo ku qabsadeen.
Ciidmada ayaa cariiri geliyay isticmaalka wadada isku xirta Muqdisho iyo Baydhabo oo dad iyo gaadiid badani ay ku safri jireen.
Ciidamada ayaa qaarkood joogaan halka loo yaqaan Ceel dhuun halkaasoo dhowr Kiilow Mitir dhanka Leego ka jirta Deegaanka Yaaq-bari-weyne.
Qeyb kale ayaa ku sugan Yaaq-biri-weyne qudhiisa halka in kalena joogaan Deegaanka carra tuurka ee u dhaxeeya Balli doogle iyo Yaaq Bari-weyne, waxaana askartaani yihiin kuwo isu gurmo la.
Dagaalkii u dambeeyay Doraad ayuu ka dhacay inta u dhaxaysa Yaaq-bari-weyne iyo Balli doogle halkaasoo askarta Shisheeye iyo Ciidamo ka tirsan Xarakada Shabaabul Mujaahidiin isku fara saareen.
Talaadaadii hore ilaa Sabtigii Doraad ahaa dagaalo is daba joog ah ayaa deegaanadaas ka dhacayay waxaana Xarakada Shabaabul Mujaahidiin sheegtay in ay halkaas ku dishay 27 askeri oo 18-ka mid ah ay Uganda u dasheen.
Kuwa kale ayaa ka tirsan Ciidamada Dowladda Shisheeyuhu dhisay ee Soomaaliya ka jirta.
Dhibaatada ugu daran ayaa qabsatay askarta gaartay halka la yiraahdo Ceel dhuun kuwaasoo laga gubay gaari Taangi ah.
Xarakada Shabaabul Mujaahdiin waxa ay sheegtay in ay Saraakiil caddaan ah ay ku dileen Dagaalada ka dhacay agagaarka Yaaq-biri-weyne.
Dadka reer Miyiga ah ee deegaanadaas ku dhaqan waxa ay sheegeen in ay arkeen ciidamada Uganda oo halka loo yaqaan Ceel dhuunka dadka qaarna ay u yaqaanaan Iidow Jallaad ciidamada Uganada oo ku aasaya gaari Taangi ah oo ka gubtay si aan qasaarahooda loo arag.Laba Jeel jire oo kala yiraahdo Cismaan Geeddi iyo Xoondoow ayaa hore u sheegay Idaacadda Islaamiga ah ee Alfurqaan in Shisheeyaha halkaas Mashaqo ku qabsatay.
Ciidamadaan ayaa hadafkoodu yahay inay gaaraan Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobalka Baay laakiin waxa ay cagaha la galeen weeraro is daba jooga ah oo kaga imaanaya Xarakada Shabaabul Mujaahidiin kuwaasoo dhaliyay in dhiigoodu ku hooro Deegaanadaan oo sidoo kale askar badan looga dilay Dowladda Itoobiay Sanadkii 2008-dii.
Afhayeenka Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin Sheekh Cabdi-caziiz Abuu Muscab oo habeen hore Saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in askartaanu rabeen in ciidamada Itoobiya kala wareegaan Gacan ku haynta Magaalada Baydhabo Maadaama Itoobiyaanku ku daaleen buu yiri weerarada Mujaahidiinta kaga imaanaya.
Waxa uu intaas ku daray in dagaaladii ka dhacayay Maalmihii tigay Yaaq-biri-weyne Nawaaxigeeda Dhankooda hal Mujaahid kaga Shahiiday Todobo kalena ay kaga dhaawacmeen kuwaasoo uu rejeeyay in uu Alle Caafimaad taam ah siiyo.
Shariif Sheekh Axmed oo ku xanuunsan magaalada moqdisho iyo Xasan Sheekh oo maanta ku booqday guriga oo ku noolyahay
Posted on October 18, 2012 by Voice Of Somalia Aside
Shariif Sheekh Axmed ayaa maalamahan danbe ku xanuunsanaa magaalada Moqdisho ,xanuunkaas ayaa la garan waayay waxna loo qaban waayay Moqdisho sidaas waxay qasab ku noqotay in dibada loo qaaday,waxaana adkaatay in loo helo meel la geeyo ka dib markii beesha caalamku jiq ka dhigeen in Shariif la siiyo maagangalyo iyo meel oo ku noolaado!
Uganda ayaa maalmo ka hor u ogolaatay in wadankeeda shariif la geeyo laakiin waxaa si weyn u hor istaagay Kenya, Musaveni ayaa saxiib oo Shariif leeyahay,isaga ayaan ku adkaystay in shariif loo helo meel oo ku noolaado,waana la ogolaaday in dalkiisa geeyo ka dib markii loo yeelay waxa ay ka rabatay kismaayo oo ahayd inay u hesho maamul iyada hoos yimaada,taas oo macnaheedo yahay inay qabsatay magaalo madaxda £aad ee gayiga Somaliyeed.
Shariif ayaa maalmahan loo qaadi doonaa Uganda oo ku noolaan doono hadii oo ka kaco cudurka haya oo ah mid aan la aqoon waxa uu yahay,laakin lagu baari doono Uganda markii la geeyo.
Shariif ayaa lagu arkay waxyaabo cajiib leh oo aan la aqoonw waxa ay yihiin,wana la oagaan doonaa maalahan soo socda,la soco wixii ka cusub.